Aqua Technician | Myint Dachan Co.,LTD. ﻿
2.9.2020, Full time , Manufacturing
· Customer ခြံများတို့ပုံမှန် ဝင်၍စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ကာ ငါး နှင့်ပတ်သက်သော ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အကြံပြုချက်များ ပေးရန်၊
· ဌာနမန်နေဂျာ အား အသေးစိတ် အစီအရင်ခံစာ တင်ပြရန်၊
· Customer ခြံများ၏ မှတ်တမ်းများကို စုဆောင်းကာ နေ့စဉ် ပို့ပေးရန်။
i.	Visit customer farms and offer technical support
ii.	Provides feedback of farm situation to the manager
iii.	Performs evaluation of livestock farming practices
iv.	Maintains record keeping system including livestock farm management & health records.
· B.V.Sc ဘွဲ့ရရှိသူ ဦးစားပေးမည်။
· လုပ်ငန်းအတွ့ အကြုံ ၂ နှစ် နှင့်အထက်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
· ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်သူ၊ အပြောအဆိုကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်ရမည်။
· အဖွဲ့ဖြင့်ပူးပေါင်း လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
i.	Bachelor of Veterinary Science
b.	Professional Experience
i.	2 years minimum experience as the livestock technician/specialist
Work location State/District: +Rest of the world
Company Industry: Animal Feed Industry
Job Descriptons 1. Collect sample,organized and conduct product and then report to operation head 2. Evaluate raw material and finished product in 3. Repeats inspection procedure until product meets quality standards and specifications are attained 4. Design and execute laboratory testing according standard procedures, make observations and interpret findings 5. Cleaning, sterilizing, maintaining, and calibrating laboratory equipment အလုပ်တာဝန်များ ၁. ကုန်ကြမ်း နှင့် က� ...
Job ads in Chemistry Jobs and in Yangon Region
Senior & Junior Salesman M/F (15)
အလုပ်တာဝန်များ · တာဝန်ပေးထားသော ဒေသတွင် အစာရောင်းအားတိုးမြှင့်နိုင်ရန် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေကာ အကောင်ထည်ဖော်ရမည်။ · Customer များအား နေ့စဉ် တွေ့ဆုံကာ အစာအား အသုံးပြုရန် မိတ်ဆက်ရမည်။ · Customer များ၏ အခက်အခ� ...
Farming & Veterinary Jobs Farming & Veterinary Jobs Animal Feed Industry Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
+Rest of the world 257 Days